3 Senator oo Wasiirka Gaashaandhigga ka mid yahay oo lagu doortay Baydhabo | Dhacdo
3 Senator oo Wasiirka Gaashaandhigga ka mid yahay oo lagu doortay Baydhabo
Ilaa lix musharax ayaa ku tartmayay saddexda kursi ee Aqalka Sare,waxaana goobjoog ka ahaa kulanka oo codeynayay 91 mudane oo ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Kursiga koowaad ayaa waxaa ku guuleystay Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji, kaas oo helay Codad gaaraya 74 Cod halka Musharixii la tartamayay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu helay 14 Cod, waxaana halaabay Saddex Cod.
Kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay Cali Sheekh Maxamuud Gacal iyo Cabduqaadir Cabdi Axmed , waxaana kursiga Aqalka Sare ku guuleystay Cali Sheekh Maxamuud Gacal oo helay 68 cod halka musharaxa la tartamayay uu helay 22 cod.
Kursiga ugu dambeeya 8-mudane ee Golaha Aqalka Sare Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku guuleystey Senator Cabdiwali Maxamed Ibraahim (Xaabsade) oo helay 68 cod halka Musharixii la tartamey ee Cabdullahi Roobow Maxamed uu helay 18, waxaana halaabay laba cod.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulkii labaad ee dhameystira doorashada Aqalka Sare, waxaana kasii horreeyay maamulka Puntland oo hal Maalim doortay dhamaan 11 kursi ay ku leeyihiin Aqalka Sare.